N'aka, anyị nwere fun ná nzukọ? | Apg29
569 online! | Sidvisningar idag: 89 660 | Igår: 178 464 |
N'aka, anyị nwere fun ná nzukọ?
Ọtụtụ mmadụ na-fun na Lindberg nzukọ Halltorp Philadelphia!
Na-ekiri ndị video:
O nke scoop! - Lindberg na-egwu na-akpọ gitarboogie!
The achọghị - Part 18
The 18 akụkụ nke m serial banyere m bụ nwata. Anyị na-na na ụlọ akwụkwọ dị elu mgbe m malitere na asaa ọkwa. Nke a na akụkụ ga-iju gị anya, nke o mere m mgbe o mere.
Migration Board na-arịọ ezighị ezi ajụjụ iji chọpụta ma ọ bụrụ na ị na-a Christian
Ọtụtụ n'ime ndị Migration Board 12 ajụjụ bụ kpamkpam-agaghị ekwe omume na-aza, na-kpamkpam adighi ike mgbe ọ n'ezie naanị mkpa ihe nke na-ekpebi ma ọ bụrụ na mmadụ bụ onye a Christian ma ọ bụ.
New Age paves ụzọ maka àmà na-egosi
Site Holger Nilsson Na 1980s, anyị nwere ihe ndị ọzọ na-abịa gafee okwu ahụ bụ "New Age". Ka otú ahụ, Otú ọ dị, ọtụtụ eju anya ihe ndị New Age bụ ihe, n'agbanyeghị eziokwu ahụ ọtụtụ nde mmadụ gburugburu ụwa na e metụrụ, emetụta na aka na a na-emekarị ugbu a na-azacha n'ihu. Ka ihe atụ, na afọ-ọgwụgwụ 1986-87, New Year Eve, ọ bụ ọtụtụ nde mmadụ, bụ ndị gara n'ime ntụgharị uche, ọhụụ na ememe okpukpe omume. Ọ bụ mba ukem ini na nke a mere ma ọ bụ a achikota mbo nke New Age ndị mmadụ n'ụwa nile.
Ga onye gbanwere mmekọahụ heaven?
Ga ndị n'ime heaven emi okpụhọde mmekọahụ site ịwa ahụ?
Ndị Kraịst na-na-akpagbu karịa mgbe ọ bụla
Image: Open ụzọ.
Open ụzọ 'kwa afọ World Watch List of Kpagbuo Ndị Kraịst na-egosi na 2019 bụ ndị kasị njọ afọ ebi. Ọ bụ nnọọ ihe kasị sie ike afọ kemgbe ndia malitere.
Reader Mail site David Billström Jizọs bụ anyị bụ isi nlereanya ruo pụta ndị na-abụghị ndị kwere ekwe. Mgbe Jizọs abịa n'ụwa, ọ maara ihe na-aga na ndị mmadụ bịakwutere ya. Ọ bụ otu ihe ahụ taa.
A kpogidere McJesus ngosi nka na Israel
Ngagharị iwe na Israel megide Jani Leinonen "sere" McJesus e sere a kpogidere Ronald McDonald.
The undesired - Part 17
Ugbu a, m anọgide na m n'ikwe na ekele serial si m bụ nwata. Akụkọ ga-amụba na osisi ike ma na-ọbụna ihe ịrịba ama. Ụfọdụ-akpali nnọọ akpali na oké ọgba ngalaba ugbu a dị n'ihu.
A nkịtị Jesus - Onye gburu olu Chineke - Part 6
Hans Jansson, Uppsala Herod Antipas izute anyị ọzọ na Akwụkwọ Nsọ akụkọ. Nke a oge o gēguzo n'iru Jesus. Ọ mgbe kemgbe afọ atọ ebe ọ bụ na Jọn Baptist beheading.
Ọjọọ ndepụta - Onye gburu olu Chineke - Part 5
Site Hans Jansson , Uppsala E nwere ihe na "nkọ" na ihe ọjọọ nke Herod omume na onodu na anyị na-akọwa. Ahụ na-eweta m ka ihe e dere n'akwụkwọ Jenesis.
Kristin amụma bụ eziokwu na oge anyị
- A amụma banyere ọgwụgwụ mgbe ụfọdụ!
The amụma oge ochie si 1800s okwu banyere Jesus na-egosi elu na ugwu na Sweden na n'ụbọchị ikpeazụ, na mgbe ahụ na ugwu niile na-ahụ!
"Chineke na-agọzi ite ime na United States of America"
Reader Mail site Nils
A nwaanyị ugbu a nwere usoro Netflix Air ebe ọ na-akwụ ụtụ ka ite ime, na okwu ndị a mechie: "Chineke na-agọzi Ime na United States of America", na-abụ abụ na-agba egwú na ya.
Na hell, emekpa mmehie
Ọ bụrụ na ị na-aga hell, ị na-emekpa. Nke ahụ bụ ihe Hell bụ maka. Dị nnọọ ka nwoke ahụ bara ọgaranya na Luk 16, ị ga-emekpa ọkụ na-agba. All ndị mmehie na-aga hell, na ha na-aga n'ebe ahụ a ga-emekpa.
Ụmụaka amụrụ ohụrụ ndị na-ama ihe 'ex'
Photo: nseta ihuenyo site na Facebook.
Bi New York City nwere ike ugbu a na-agbanwe ha okike-enweghị ike na akwụkwọ. Ọzọkwa, ha pụrụ ọbụna ịgbanwe ha mụrụ ọhụrụ na okike.
Ọ bụrụ na a mụrụ gị na-ezighị ezi ahụ, ị ​​nwere ike a mụrụ ọzọ
Louise Nelum Sanda Mali "Loui" Aja, 26, bụ a Swedish bọl kpakpando ndị na ugbu a na-akwụsị na-akpọ bọl na-nyochaworo maka okike dysphoria.
Christian Bale: Daalụ Satan n'ike mmụọ nsọ
Foto: Site TV4.
Price maka Best-eme ihe nkiri gara omee Christian Bale na film Vice, onye kelere ya n'ike mmụọ nsọ: Satan.
America News banyere Sweden: Microchips tinyere maka ego management na Sweden
Na Stockholm, Sweden, họrọ 1000 ịhọrọ Shop na a obere Microsystem. Ibe tinyere n'okpuru ha akpụkpọ.
Ọ nwere na-eme na Islam
Reader Mail site Stefan Eliasson N'ụzọ dị otú a di ya na-eme. Louisa na Maren adịghị pụrụ iche, na-adịbeghị anya hụrụ a uka ili na 34 isi Kraịst nọ Libya.
Vecka 04, tisdag 22 januari 2019 kl. 15:10
Na-emegide Kraịst na-achịkwa China
Site Holger Nilsson E nwere ugbu a na-eme eme na China nwere ike eleghị anya, ọtụtụ na-adịghị eweta na - ọ bụ a akara usoro na eleghị anya ọ dịghị onye nwere ike iche n'echiche.
Alakụba kpochara mgbe New Year si n'abalị, ma nke a abụghị Islam
Alakụba ọcha n'okporo ámá nke Gothenburg mgbe New Year si n'abalị nwere ihe ọ bụla na-eme na Islam. Ọgwụgwụ m ga-ewere n'ihi na ọ na-mgbe nụrụ "nke a abụghị Islam" mgbe a ọbara Muslim iyi ọha egwu na - ezie na Muhammad ma nyere iwu na rụrụ-eyi ọha egwu omume n'aha nke Allah.
Nzọpụta m - Christer Åberg
Mgbe o mere ka m, m guzo na-ekwu na otu n'ime ndị ndú na Pentikọstal ụka n'ọnụ ụzọ aha ya bụ Donald. Mgbe ahụ, ọ jụrụ, sị: "Ị chọrọ ka a zọpụta?" Ọ bụ ezie na amaghị m ihe nke a bụ ihe m kwuru ...
Ha chọrọ ịchị Mars ma adịghị gaa n'ọnwa
Electric ụgbọ ala ụlọ ọrụ na naa nchoputa na CEO Ilọn Musk na-eme atụmatụ iji ziga ndị ọzọ Mars na nrọ nke colonizing uwa.
Nwoke idina nwoke na ahụ-nwoke mmekọrịta - Stefan Gustavsson
Gịnị ka Bible na-ekwu banyere nwoke idina nwoke? Akwụkwọ Nsọ odide ma ò esemokwu na-illuminated na a nnọọ isi isi, na a dị nnọọ mma nkuzi site Stefan Gustavsson.
Ọ bụrụ na ị chọrọ ihe ọmụma dị ukwuu ga-azọpụta?
Ma i nwere ike ọ gaghị emeri ndị ọzọ maka Jesus Christ. Ya mere, ọ dị mkpa ịmara ihe dị na Bible na otú ga-azọpụta. The Bible na-ekwu na unu mara na unu nwere ndu ebighebi. Olee otú anyị pụrụ isi mara nke a?
Ibikọ ọnụ abụghị, ọ dịtụbeghị mgbe na ga-adị a alụmdi na nwunye
Iji imeghari ka onye kwuru mmekọahụ na onye ọ bụla ọzọ, ọ bụ otu ihe ka ị na-lụrụ di na nwunye ọ bụla ọzọ. Ma nke a abụghị na-agbanwe agbanwe na Bible.
Ị maara na Bible na-ekwu ọtụtụ ihe banyere ụmụ anụmanụ? Lee, m nwere ogologo ndepụta nke ọtụtụ n'ime ụmụ anụmanụ na Bible na ụfọdụ ụmụ ahụhụ na Bible zoro! Biko-enwe!
The ndabere nwoke ime mmụọ ọchịchọ
Of Sigvard Sword Na m Olileanya amụma dere ede nke a, m na-etinye N'ilu Jizọs banyere "furu efu / återvunne nwa" (Luke 15) dị ka ihe atụ si, ihe afterimage nke gara aga narị afọ iri ihe.
Iwu na-akwadoghị na-egosi na ndị inyom isi site Alakụba
Ọ bụ iwu na-akwadoghị na-egosi eziokwu ụmụ nwanyị abụọ ndị njem nleta na Morocco na isi site Alakụba.
Ebe a na-otu keisi ocha nwaanyị isi site Alakụba
Abụọ na-eto eto keisi ocha inyom si Scandinavia na isi site Alakụba mgbe ha mara ụlọikwuu ha na Morocco. Ọ na-akpọ ndị igbu ọchụ nke ndị inyom, omume nke iyi ọha egwu, nke N'ezie ọ bụ, ma a ihe ezi okwu bụ na ọ bụ a okpukpe kpaliri islam igbu mmụọ nsọ site Koran.
Sedan 23:42 2013-08-16 har det varit 464 860 987 sidvisningar på Apg29! Apg29 har just nu 17 129 bloggartiklar, 93 312 kommentarer och 61 352 bönämnen.